Gabay waxa diriyay abwaan cabdiraxaman yusuf sabariye.
Sanadkii 2018 gabay ka waxa ku saabsanyahay is maamulid la'aanta iyo dhaxashey reebi karto.
Mar hadii an midowi waynayMaskaxdeyna isku maa'muli waynay.
Maankena ka tashan waynay
Muruqeyna maali waynay
Maxa diidi qarama midoway
Maskaxdooda nagu maamulan
Maankooda nagu taliyaan
Muruqooda nagu qabtaan
Mowlan ka magan kalnee
Maanta xaalku waa sidee
Markaa eegto midig iyo bidix.
Maankaab maati aan u nixin
Madfac ku dhufta
Mugti kaliyay ubixii dalka
Maskiin laga eexday
Maati lagu dunday
Mugdi iftiin la moday.
Mid baa muraalki dhalinta jabiyay
Midba miir la' u dhaqma
Mas madow baa noo no dhexjiifa mininka.
Miyaan hurda kama i garna.
Moogayaal kala maan ah
Mid walb jiho u socda dantiisa eega
Mataneynti qaranka laga tagay iyo mamimul. Iyo maamul maciin biday shishiiye
Mooshin quutayaal magac beel madala
Maamul wanag an eegi garin luqaafa un ku maran. Dheh
Midnimada xasilnimo diideyn ka door bidyn khilaaf,dheh
Maalntii aduunga naga reebeyn bey wali sidii no gilgilayaan dheh.
Markii kanboolay asay u sareeyn ku wana qadan wayn dheh.
Maalintii iftiinki dalka burburiyeen ayey dhiig ku qubeysteen dheh.
Maanta neh maska mininka no dhaxjiifaa kuuxisa u adgeynsan waynay dheh.
Mar hadaan iska qaban waynay sidii baan wali qabyo u nahay dheh.
Muraadkeyna waa inta harday ina maanta difaana dhe.
Mowlaan tala saaranay diidnay burburkale Dheh.
Madaxaleysiyaasha kuwa xarag u haya inaa goy'no dan nogu jirtaa dheh.
Midnimo waarto o cadowga iska saarna dan nagu jirtaa
Richard Marius,Melvin Eugene Page